Vatoaratra sy Bateria
Tonga soa eto amin’ny takelaka fanoro©.
Mbola mamerina fisaorana ny mpamaky ary mankasitraka amin’ny soso-kevitra hanatsarana ny takelaka. Misy amin’ireny hevitra ireny no napetraka manomboka amin’ity fanontana ity. Toy izany ohatra ny fanaovana printy ny pejy sy ny famadihana ny pejy ho PDF araka izay tian’ny mpamaky. Ny tolo-draharaha hafa toy ny toetr’andro sy ny sandam-bola dia mbola loharano vahiny no nalaina fa tsy mbola manana widget ny sampan-draharaha Malagasy miantoka izany. Ampidirina miandalana ireo hevitra hafa rehefa matotra ny fanantanterahana azy.
Mirary fialan-tsasatra mahafinaritra ho an’ny rehetra
Fampiasa mahazatra sy efa hatry ny ela ny laro amin’ny sakafo. Mety fomba fitehirizana izany na fanomezana endrika sy loko mampilendalenda na indrindra koa fanomezana hanitra sy tsiro. Ny laro dia mety ho natoraly na namboarina manokana tamin’ny fomba samihafa, simika ohatra.
Ny fanoro© dia manazava amin'ny teny malagasy ny tsara ho fantatra momba ny karazana laro fampiasa ary mitondra koa valiny amin'ny fanontaniana mipetraka matetika .
Akora tsy azo ialana eo amin’ny fiainana andavanadro ny vatoaratra sy bateria. Misy karazany izy ireny na ny marika, na ny bikany, ary indrindra ny vidiny.
Ny fanoro© dia mizara amin’ny teny malagasy ny tsara ho fantatra momba ny vatoaratra sy ny bateria, ny karazany sy ny toetrany, ary koa fanoroana amin’ny fampiasana azy.
Izay akora fampiasa matetika ihany no ambara eto aloha fa azo atao ny mandinika ireo fampiasa manokana amin’ny manaraka.
Ramose: Manao ahoana tompoko
Mpivarotra: Manao ahoana ianao Ramose, inona ny anao izay???
Ramose: mba saika hividy soutien gorge azafady, ilay karazany “evanzelika” hoy madama;
Mpivarotra: oooooh… tena lany iny karazany iny Ramose, mandeha be iny izao. Ilay netin-drazana misy karazany efatra ary mbola betsaka raha mety;
Ramose: inona avy ilay karazany efatra???
Mpivarotra: ny voalohany mitaty izay mavesatra, ny faharoa manitsy izay mivilana, ny fahatelo mampijoro izay milofika, ary ny fahaefatra mampitraka izay reraka;
Ramose: aaaaah … mazava, ary ahoana indray ilay karazany “evanzelika”???
Mpivarotra: iny indray ensemble kah: ny ambony manova ny dongona ho tendrombohitra ary ny ambany mampiseho ny zava-miafina!!!!
Boky amin’ny teny frantsay nefa milaza ny mombamomba ireo olo-malaza, Malagasy sy vahiny, nametraka dia teo amin’ny tantaran’ny firenena sy ny fiarahamonina Malagasy. Sanganasa miaraka amin’ny bibliôgrafia matevina ary azo lazaina ho diksionera mikasika ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny teo amin’ny tontolon’ny pôlitika, fampianarana, kristianisma, literatiora, mozika, hosodoko, sns.
Tsy ho lalovana fotsiny ireo lalana sy toerana mitondra ny anaran’ireo olo-malaza ireo rehefa avy namaky ny “Iza moa?”. Ny faniriana dia ny ivoahan’ny fanontana manaraka izay enga mba hiampy ireo hafa nametraka ny anjarany taty aoriana.
Mpanoratra: Dominique Ranaivoson
Fanontana voalohany : 2004
Loha hevitra teo aloha
Eva fikojana lamba
Fanazavana ireo sary eva amin'ny etikety
Fanazavana ireo eva famantarana plastika
Ny tsara ho fantatra momba ny karazana, fampiasana sy fikojana vatoaratra sy bateria.
(*) Loharano vahiny no nakana ny tolo-draharaha eto amin'ny takelaka ary mety tsy mitovy amin'ny avoakan'ny sampan-draharaha ofisialy sy ny gazety malagasy.
Malagasy Ariary Exchange Rate
Copyright © 2015-2018 fanoro. All Rights Reserved.